Maaraynta Wakhtiga (Time managment)
maxamedsheekafguun Abriil 6, 2020 waxbarasho
Halkan waxaan ku soo lifaaqayaa waxooga baraarujin ah oo ku saabsan faa’iidada ay Qorshaynta Waqtiga u leedahay horumarka nolosheena. Waxaan qormadan ku doortay aniga laftayda ayaa ku hawalan siddii aan nafta ugu tababari lahaa
inay noqoto mid u laylyan inay la jaan qaado waqtiga. Dabcan Waxii naftayda aan la jecelahay waa inaan la jeclaahay walaalaha oo dhan.
Maaraynta Waqtigu (Time Management) waa hanaan aasaasi ah oo u baahan, la qabsasho, tababar, xirfad, agab, iyo qaab shaqo isku xidhan oo kugu caawinaya inaad qiimo badan siiso koro u qaadista tayada wakhtiga noloshaada.
Muhiimada inaad waqtigaaga qaabaysaa micnaheedu maaha wax-qabad badan oo aad samayso, maxaa yeelay waxaa taas ka mudan inaad ku hawlan tahay tacab midho-dhal leh; in juhdiga iyo dadaaal kaagu ku wajahan yihiin jahada saxada ah.
Haddii aad wakhti lumis tahay waligaa kob cagaar leh ka soo durdurin maysid. 10 ka qodob ka dooro inta kaa anfacaysa, kuna dadaal inaad fuliso oo aad caado ka dhigato ka faa’iidaysiga bar kasta oo wahtigaaga ah.
1. Qor oo qaabee amuuraha: Qaladaadka guud ee qorshaha wakhtiga haleeya waxaa ka mid ah inaad isku halayso xasuustaada oo aad macluumaad badan ku kaydiso taas oo ugu dambayn buux dhaafisa maskaxda, wax badana aad iloowdo. Inaad liis garayso oo qorto shay kasta waxay kuu awood siinaysaa inaad xadido waqtiga mashaariicda iyo amuurahaaga adiga u fullinaya si abaabulan.
2. U kala gur siday u kala mudan yihiin: Waxaa la yidhi oodo dhacameed siday u kala sareeyaan ayaa loo kala guraa. Waa lagama maarmaan inaad u liis garayso sida amuuruhu u kala mudan yihiin adiga oo diirada saaraya waqtiga aad ku wajahayso xaajooyinka sida dhabta ah u saamaynaya mustaqbal kaaga. U calaamadi liis kaaga siday u kala horeeyaan (prioritising the importance ABCD).
3. Qorshee usbuucaaga: Waqti sii bilawga usbuuca kasta qorshaynta jadwal kaaga. Wakhti dheeraada inaad tan siisa waxay kaa caawinaysa sare u kaca wax soosaar kaaga iyo dheeli-tirka mashaariicda mudada dheer leh iyo kuwa muuhimada gaarka ah leh. Waxaa kaliya oo aad u baahan tahay 15 ilaa 30 daqiiqo oo aad ku qorshayso wiigaaga.
4. Ku dhaganoow boog-yare haaga (notebook): Ma ogid goorta ay kugu soo dhici karto fikrad wanaagsan ama qorshe qiima lahi. Waa inaad sidato bug-yare markasta oo aad baxayso si aad u weelayso arragtida cusub. Haddii aad sugto waxooga waxaa laga yaaba inaad ilawdaba. Waxaad kalo isticmaali karta inaad digital recorder ku kaydasto macluumaadka (hadaad haysato).
5 Baro inaad maya tidhaahdo :Marar badan ayaynu la khadyaanaa mashquul dartii sabaabta oo ah waxa aynu balan qaadnay ee ina sugaya inaynu fulino iyo waxa aynu qaban karo ayaa kala badan; waxa aynu nidhaahnaa haa iyada oo ay runtu maya ahayd. Baro inaad maya tidhaahdo wixii aan daruuri ahayn si aad wakhti ugu hesho kuwa muhiimada leh.
6. Inta aanad falin ka fiirso: imisa jeer ayaad balanqaaday wax aad hadhaw ka qoomamaysay? Inta aanad balanqaadin mashruuc cusub, waa inaad si qoto dheer uga fiirsataa wakhtiga uu u baahan yahay. Tani waxay kaa xijaabaysaa shaqo badan oo aanad u daaqad hayn.
7. Joogtee kobcinta aqoon taada: Jadwal kaaga ku darso wakhti aad wax cusub ku barato si aad ku horumariso awoodaha dabeeciga ah ee Eebe kugu galaday iyo kalsoonidaada shaqsinimo. Aqoontu ma dhamaato, heer kasta oo aad wax barashada ka gaadhana wax uun baa kaa dhiman, isku day inaad wax korodhsato. Tusaale ahaan, waxaad maalintii saacad xaadiri kartaa tasfiirka quraanka. Waxaad saacad siin kartaa akhriska buugaagta iyo magazine-da aad jeceshayay (khasatan kuwa la xidhiidha field kaaga). Horumarka aqoon taada iyo xirfadaadu waxay kor u qaadaysaa hal-abuurnimaada, waxay quwaynaysaa darajadaada shaqo, waana wax halkii aad tagtaba kugu anfacaaya. Haddii aanad wax baranayn adigu wax bar oo dadkaaga uga faa?iidee aqoontaada. Wixii aad bartaaba (Amxaari-na ha ahaadee) way anfacaysaa, waa sadaqo jaariya, sharafna waabay kuu tahay.
8. Dib u qiimee wixii wax ka badel u baahan xarakaad kaaga: Waa fikrad wanaagsan inaad joogtayso qiimaynta sida aad u isticmaalayso waqtigaaga. Sidaa darted, way fiican tahay inaad jadwelka ka saarto wixii u muuqda inaanu midho dhal lahayn ama aan u adeegayn danahaaga si aad wakhtiga ugu buuxiso mashruuc kale oo ka qiimo badan.
9. Calaamadi caadooyin kaaga liita: U samee liis caadooyin kaaga liita ee waqti gaaga galaafta, curyaamiya horumar kaaga, ee daboola guulo aad gaadhi lahayd. Marka aad aqoonsato, u hawl gal sida ugu macquulsan ee caadada aad walaftay aad uga samota bixin lahayd naftaada. Ogsoonoow sida ugu sahlan ee aad caadooyinka xun ku jari kartaa waa adoo qaar wanaagsan halkooda ku buuxiya.
10. Hayso himilo aad hiigsanayso (a goal journey): Markasta waa in hadaf iyo meel aad hiigsanaysa oo ugu saraysaa ay jirtaa. Samee buuga hadafka, (a gaol journal) oo qor talaabo kasta oo aad xaga horumarka u qaado. Ugu yaraan halmar usbuucii booqo xasuus-qor kaaga oo hubi inaad ku taagan tahay jidkii saxda ahaa (on the right truck of your goal journey).
Toban kan qodob waa qaar qofkii joogteeya u suurto galinaya inuu wakhtigiisa uga faa’iidaysto sida ay tahay. Fadlan mar walba maanka ku hay in waqtigu yahay waxa ugu qaalisan hantidaada. Ogoow, daqiiqaddii ina dhaaftaa ma soo noqoto badalkeedana ma helo, cimrigeena uun baanay ka go?antay. Wixii aad maanta qabsan karto bari hawdhigan. Aakhirona waa lama huraankiiye isku day inaad cibaadada IlLaahay u hogaansanto. Illahoow toobada nagu noolee oo nagu dil. Aamiin.
Mustafe C/laahi Cumar (Leeddo)
SAHAY QAADO GABAY